ANTOKO TGV : Vonona tanteraka hampandroso an’i Madagasikara ireo mpikambana
Isan’ireo antoko manana ny tanjany sy mitana ny laharana voalohany eto Madagasikara ankehitriny ny antoko TGV na ny Tanora Malagasy Vonona. 10 février 2019
Ny mpikambana no mametraka ny olona izay tokony hitarika ny antoko any amin’ny Faritra tsirairay ary izany dia ankatoavin’ny mpitarika ao amin’ny foibe. Mifanome toromarika sy mifampita hafatra hatrany ny mpitarika rehetra amin’ny fibanjinana ny tanjona iraisana dia ny fampandrosoana an’i Madagasikara izany. Firaisankina tanteraka no manjaka ao anatin’ny antoko ary mifanohana sy mifampitsinjo ny mpikatroka rehetra.
An-teny ierana no andraisana ny fanapahan-kevitra rehetra eo anivon’ny antoko ary izany dia iarahan’ny mpikambana rehetra manapaka.
Azo disoina avy hatrany araka izany ny filazan’ilay olom-boafidy iray any amin’iny Faritra avaratry ny Nosy iny fa « miady ny mpitarika ny Antoko TGV ». Tsorina etoana fa tsy mbola nisy fifandirana na dia indray mandeha monja aza teo amin’ity antoko ity fa ireo olona malailay fonosana, nanohana ny Filoha Andry Rajoelina, fony izy mbola kandida sy ireo izay nitetika ny hahazo seza tamin’ity fitondrana ity no manely tsaho sy milaza vaovao tsy marina ary koa manoso-potaka ny antoko. Ny Filoha Andry Rajoelina izay natolotry ny antoko rahateo dia efa nanipika mazava na dia natolotry ny antoko aza fa tsy kandidan’Antoko izy, raha nilatsaka hofidiana ho Filoham-pirenena fa ho kandidan’ny vahoaka malagasy rehetra. Voaporofo io teniny io. Hita taratra izany nandritra ny fandrafetana ny mpikambana ao amin’ny governemanta ka tsy ilaina resa-be na hararaotina intsony angamba.
Iray namoy ny ainy, nitohana tanteraka ny fifamoivoizana KAMIAOBE NIFANDONA TANY AMIN’NY RN2 (157) 19 août 2019 Nokendain’ilay jiolahy ilay ramatoa, lasa ny entana sarobidy rehetra AMBOHIDRAPETO (120) 19 août 2019 Efa any am-ponja vonjimaika ilay tovolahy FANOLANAN-JAZA TENY AMIN’NY PORT (115) 22 août 2019 Olona 4 namoy ny ainy, 19 naratra mafy LOZAM-PIFAMOIVOIZANA TAO MAEVATANANA (111) 20 août 2019 Tsy mitombina ny filazana fa nahita lohan’olona maty ilay ankizivavy TONIA MPAMPANOA LALANA (85) 21 août 2019 Tra-tehaka ireo 3 lahy saika hanondrana volamena an-tsokosoko NOSY BE HELL-VILLE (82) 22 août 2019